Banyere Anyị - Ningbo Leway Manufacturing Ltd.
Ịsa Door ala
Ịsa Door emefu
N'ụba Door mgbabere uzo
Obi ụtọ na-anabatanụ ileta anyị ụlọ ọrụ! Anyị na-atụ ka imekọ ihe ọnụ na gị maka ibe uru!
Ningbo Leway e onwem na elu mmepụta equipments, gụnyere ihe karịrị 50 akpaka lathes, plastic injection igwe na metal na-anwụ-mgbatị ígwè ọrụ. Ọtụtụ onwe-mepụtara akpaka nzukọ igwe na nkwakọ ígwè ọrụ. Monthly mmepụta ike nwere ike iru ruo 1 nde tent.
Ningbo Leway Manufacturing LTD bụ ọkachamara emeputa na specializes na-amị ịsa ụzọ akụkụ gụnyere ịsa ụzọ rollers, ịṅụ, na-adabere na ndị ọzọ na ụzọ na window ngwaike.
Anyị na-enye OEM, ODM ọrụ, anyị R & D otu na-pụrụ iche na iji CAD, UG, PRO / E ịzụlite na chepụta ọhụrụ ngwaahịa, anyị na-emekarị-arụkọ ọrụ na ndị ahịa na-erigbu na imewe ihe karịrị 100 ọhụrụ ngwaahịa ọ bụla n'afọ.
Home iPhone anọdụ email gị gaghị bipụtara, consectetuer adipiscing elit, Sed diam
bụ ọkachamara emeputa taht specializes na-amị ịsa ụzọ akụkụ gụnyere ịsa ụzọ rollers, ejiri, na-adabere na ndị ọzọ na ụzọ na window ngwaike. Ọ na-emi odude ke Ningbo obodo, Zhejiang n'ógbè, 20 kilomita n'ebe Ningbo n'ọdụ ụgbọ mmiri na 2 awa 'mbanye si Shanghai ọdụ. The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 10,000 square mita, inwe ihe karịrị 100 tozuru okè ọrụ nwere nkà, na nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmahụ na-na-amị ịsa ụzọ akụkụ.
The ụlọ ọrụ mgbe niile-ekwu si na management ụkpụrụ: àgwà dị ndụ nke ụlọ ọrụ. Anyị na-onwem na ihe kwesịrị ekwesị management na ule pesonel, onwem na ezigbo ọtụtụ ngwá, ule akụrụngwa. Jighi nnyocha usoro ana achi achi elu ngwaahịa mma site stickily inyocha ofụri ngwaọrụ-abata na-na ngwaahịa na oku. Na ụlọ nyocha, anyị pụrụ ime ọtụtụ dị iche iche iche iche nke ule, dị ka ọrụ ndụ ule, n'ibu Njirimara ule, transverse mmetụta ule, ibu ule na nnu ịgba ule. Site na aka ike àgwà akara ọ bụla usoro nke n'ichepụta, anyị ngwaahịa mma zụlitere ka a ọhụrụ larịị ma e-gbaara site OA, TUV, n'ọtụtụ ebe, ghọtara na ụlọ ọrụ.
The ụlọ ọrụ nwere ike ọhụrụ ngwaahịa imewe na mmepe ike. Anyị na-enye OEM, ODM ọrụ, anyị R & D otu na-pụrụ iche na iji CAD, UG, PRO / E ịzụlite na chepụta ọhụrụ ngwaahịa, anyị na-emekarị-arụkọ ọrụ na ndị ahịa na-erigbu na imewe ihe karịrị 100 ọhụrụ ngwaahịa ọ bụla n'afọ.
Email Akwụkwọ Akụkọ:
Door Hinge, Commercial Glass Door ịṅụ, Ịsa Door ala, Custom Zinc Alloy Products, Ịsa Door emefu, Eji Door ala,